Imewe Mmewe
Chọpụta atụmatụ dị mma site n’aka ndị nrụpụta ụwa niile.
Choputa ezigbo udiri
Chọpụta ngwaahịa ndị mepụtara site na ụdị ụwa.
Choputa ihe ohuru
Choputa ihe owuwu kachasi mma site na ihe ngbasi uwa nile.
Choputa ihe omimi ohuru
Choputa ihe okike eji emeputa ihe site na ndi n ’ejiji mba uwa.
Choputa ihe okike ejiji
Choputa uzo ihe omuma karie site na ndi n ’imeputa ihe ngosi uwa.
Choputa uzo ihe omuma
Chọpụta atụmatụ usoro kachasị mma site na ụlọ ọrụ nhazi ụwa.
Choputa usoro di nma karie
Ihe Ngosi Okporo Uzo
Wenezdee 10 Novemba 2021
Ihe Ngosi Okporo Uzo Nke a bụ ọrụ ngosipụta nke ụlọ ọrụ ejiji eji ewu ewu na China. Isi okwu nke okporo ụzọ a na-eme ka ndị ntorobịa nwee ikike ịme onwe ha ihe oyiyi, ma gosipụta mkpọtụ gbawara n'okporo ụzọ a na-eme na ọha. Ejiri ụdị Zigzag dị ka isi ihe ngosi, mana ya nwere nhazi dị iche iche mgbe etinyere n'ụlọ ntu n'obodo dị iche iche. Ihe a na-ahụ n'ụlọ obibi ihe ngosi ahụ bụ “kit-of-qaybo” prefabriculo n'ụlọ ọrụ ma wụnye ya na saịtị ahụ. Enwere ike itinyegharị akụkụ ụfọdụ ma ọ bụ tụgharịrị iji mepụta ụlọ ntu ọhụrụ maka nkwụsị ọzọ nke okporo ụzọ.
Tiuzdee 9 Novemba 2021
Eserese Eserese Akwụkwọ a bụ maka eserese eserese; ọ na-enye nkọwa doro anya, usoro nkọwa zuru ezu na usoro nhazi dị ka usoro eji eme ihe iji soro ndị na-ege ntị nwere ọdịbendị dị iche iche na-emekọ ihe na usoro gụnyere atụmatụ nke eserese dị ka ọrụ, usoro nhazi dị ka usoro, usoro nhazi ụdị dị ka ọnọdụ ahịa, ihe eji emechi ya. ndebiri edepụtara ma nwee ọrụ sitere na ihe okike dị egwu, nke a na-eji egosi ụkpụrụ nke okike.
Ụlọ Ọrụ Ire Ere
Mọnde 8 Novemba 2021
Ụlọ Ọrụ Ire Ere “Mountain” bụ isi okwu nke ụlọ ọrụ a na-ere ahịa, nke sitere n'okirikiri mpaghara Chongqing. Ofkpụrụ nke marbles dị n'ala na-akpụ n'ụdị triangular; enwere ọtụtụ akụkụ isi na nkọ dị nkọ na nkuku akụkụ ahụ a na-ahụ anya na ndị a na-anabata oge nnabata, iji gosipụta echiche “ugwu”. Na mgbakwunye, steepụ ndị na-ejikọ ala dị iche iche ka emere ka ọ bụrụ ebe ha ga-agafe n'ọgba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-akwụgharị ọkụ ọkụ si n’elu ụlọ, na-e sceneomi ọnọdụ mmiri na ndagwurugwu ma na-egosi mmetụta anụ ahụ, iji mee ka echiche ahụ dị nro.
Eserese Maka Ụlọ Ezumike
Mbọsị Ụka 7 Novemba 2021
Eserese Maka Ụlọ Ezumike IMlọ PRIM PRIM mepụtara njirimara anya maka ụlọ ndị ọbịa SAKÀ gụnyere: aha na njirimara akara, eserese maka ụlọ ọ bụla (akara ngosi, ụkpụrụ akwụkwọ ahụaja, ihe osise maka eserese mgbidi, ngwa ohiri isi wdg), imewe weebụsaịtị, kaadị ịma ọkwa, baajị, kaadị aha na akwụkwọ ịkpọ òkù. Lọ ọ bụla na ụlọ ndị ọbịa SAKÀ na-ewetara akụkọ akụkọ dị iche metụtara Druskininkai (obodo ntụrụndụ na Lithuania ụlọ dị na ya) na gburugburu ya. Ime ụlọ ọ bụla nwere akara nke aka ya dị ka isiokwu dị na akụkọ mgbe ochie. Akara ndị a na-egosipụta na eserese ime ụlọ na ihe ndị ọzọ na-eme ka njirimara anya ya.
Satọdee 6 Novemba 2021
Rug Rugs bụ ebughi oke oke, ihe mgbaru ọsọ bụ ịgbagha eziokwu a dị mfe. A na-enweta nro nke ọdịdị atọ na naanị agba atọ. Nesdị ụda dị iche iche na ịdị omimi nke ahịhịa ahụ dabere na obosara na njupụta nke eriri dị iche iche, kama inwe palette buru ibu nke nwere ike tinye otu ohere, si otú a na-enye ohere maka mgbanwe. Site n’elu ma ọ bụ n’ebe dị anya, ahịhịa ahụ yiri mpempe akwụkwọ. Agbanyeghị, mgbe ị na-anọdụ ala ma ọ bụ dina n'elu ya, nro nke folda ahụ agaghị enwe ike ịghọta. Nke a na - eduga n'iji usoro mmegharị dị mfe nke enwere ike ịnụ ụtọ dị ka usoro adịghị adị.
Fraịdee 5 Novemba 2021
Akwa Mgbe ọkụ ahụ ji ọmarịcha banye n’ime windo, ọ ga-eweta ọmarịcha ọkụ, ọkụ iji weta ndị mmadụ n’ime ụlọ ahụ mgbe ihe dị omimi ma dị jụụ n’uche, dị ka Nyx nwere ihe omimi na nke dị jụụ, ihe eji akwa akwa emechiri emechi na ighikota na -aghari ịkọwa nkọwa nke ịma mma.
Anyị hụrụ mbụ na okike aghụghọ, nka, ije, ejiji, eserese eserese, ọhụrụ na usoro imewe. Kwa ụbọchị, anyị na-ahọrọ ma na-ebipụta atụmatụ dị mma site na ndị na-ese ihe nwere nghọta, ndị okike okike, ndị na-ese ihe na-ewu ewu na nnukwu aha. Ebumnuche anyị bụ imepụta ekele na nghọta zuru ụwa ọnụ maka imewe nke ọma.
Ihe eserese (423)
Cloud of Luster Weddinglọ Oriri Agbamakwụkwọ Satọdee 2 Julaị
Sberbank Headquarters Atrium Fraịdee 1 Julaị
Winetime Seafood Nkwakọ Tọọzdee 30 Juun
Julaị 2022 (93)
Juun 2022 (90)
Mee 2022 (93)
Eprel 2022 (90)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 2 Julaị
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 1 Julaị
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 30 Juun
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 29 Juun
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 28 Juun
Ihe Ngosi Okporo Uzo Eserese Eserese Ụlọ Ọrụ Ire Ere Eserese Maka Ụlọ Ezumike Rug Akwa
2022 Imewe Mmewe.